Vikings. Oge gboo na mgbe niile na ejiji. Fọdụ agụ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ule, Egwu efu, Akwụkwọ, Novela, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
Nkpuchi ihu: (c) TVNorge. Si ya tv show Gaa na siste viking (Ikpeazụ Viking). Onye na-eme ihe nkiri Norwegian, onye nduzi na onye ngosi Trond Espen Seim.
Vikings. Obodo ole na ole ama ama, juputara na akụkọ ifo na akụkọ ifo. Oge gboo na akuko nke mmadu nke na adighi agha. O dighi akwukwo. Ana m arara gị nye gị akụkọ a n'ihi na m na-eme ememme taa taa bụ Ọktoba 47 nke dabara na otu: ihe okike ahụ nke na-achọ azụ mkpuchi ahụ na nke ahụ na-egosi na chi ụmụ Odin ka na-aga ije na forwa maka ngọzi nke mmadụ. naanị iri ari na ya. N'ebe ahụ ka ha na-aga 7 ọgụgụ dị iche iche ahọpụtara.
3 Northumbria, Alaeze Ikpeazụ - Bernard Cornwell
3.0.1 Usoro isiokwu rue ugbu a:
4 Akụkọ mkpirikpi nke Vikings - Manuel Velasco
6 Saga nke Greenlanders & Saga nke Eirikhie Red - Icelandic anonymous na narị afọ nke XNUMX
7 Ndị na-eri ozu - Michael Crichton
Na viking - Bobbi Smith
Anyị na-amalite na a romance akwụkwọ. Ọ bụrụ na enwere ike idozi aha dabara adaba karịa, nke a na-enyekwu egwuregwu n'ụdị a, ọ bụ Viking iji dị ka nke dị na mkpuchi ahụ iji.
Onye edemede America Bobbi smith mix akụkọ ihe mere eme na ihunanya na akụkọ nke dike Ugochi iwu. Enweghi mmeri, ruo mgbe ndị Saxon meriri ya n'ihi aghụghọ dị nnọọ nso. Otú ọ dị, na n'agbanyeghị ịbụ merụrụ ahụ ma mee onye mkpọrọ, enye osobo a atụghị anya ya. Nwanyị dynna bụ ịlụ nwanyị stereotypical villain Saxon onyeisi Edmund. Dynna kpọrọ ya asị na Brage na-ahụ ohere iji gbapụ ọsọ. Ya mere, ha na-eme. Ajụjụ bụ ọ bụrụ na ha nwere ike ịgbapụ nye ndị na-achụ ha ma ọ bụ nwee mmasị na agụụ nke ha na-enweghị ike ịsị na-eche.
Ọ na-atọ ụtọ, ma dịtụ cumbersome n'akụkụ ụfọdụ. Enwerekwa nnukwu ọdịda dị ka, dịka ọmụmaatụ, ike e nyere agwa onye ọjọọ ahụ wee ziga ya n'egbughị oge. O sina dị, enwere ike gụọ ihe kachasị mma site na nyocha nyocha banyere ọtụtụ cliches nke ụdị.
Anyị na-aga akwụkwọ akụkọ ihe mere eme ya na onye edemede di nkpa nke edemede, American James L. Nelson. Nke a bụ akpa aha nke saga raara nye ha.
Anyị nọ n'afọ Udo nke 852 C. Vikings nọ na-awụli n'oké osimiri ruo ọtụtụ afọ, na-emeri ma na-ebukọrọ ókèala. Ha mechara rute ụsọ oké osimiri England na Ireland. Ọ bụ ezie na na mbido, njem ndị a bụ maka ngwongwo ahụ, ha akwụsịla ebe ahụ, n'agbanyeghị mmegide na-emegide, dị ka ha nọ na Ireland.
Thorgrim the Night Wolf na Ornolf the Tyreless zutere ụgbọ mmiri ndị Irish iburu ihe dị oké ọnụ ahịa: okpueze. Ha na-ewere ya na ọgụ ike ma na-eleghara ihe ọ pụtara nye ndị Ireland na ike ọ na-enye eze nwere ya. Ya mere, ha ga-etinye aka na nkata nke aghụghọ na ime ihe ike na Ireland mgbe ochie, ebe ndị eze obodo na-alụ ọgụ ma na-awakpo site na ugwu iji weghara ọchịchị.
Northumbria, alaeze ikpeazu - Bernard Cornwell
Otu n'ime ndị isi ukwu nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme mba ụwa enweghị ike ịhapụ ndị protagonists dị ka Vikings ịrara saga, nke Saxons, Vikings na Normans, nke nwere Akwụkwọ 7.
Onye edemede bekee setịpụrụ usoro isiokwu a na mwakpo Viking nke Great Britain n'oge ọchịchị Alfred Onye Ukwu. Na ọ na-amalite n'afọ 866 mgbe Uthred, bụ nwa amaala Anglo-Saxon nke agbụrụ ochie, bi n'etiti ụwa abụọ. Vikings ha jidere ya dị ka nwatakịrị na nke ahụ na-enyere ya aka ịmara ma nwee ike ikpe ikpe omenala, nkwenkwe na usoro nke Saxon na Danes. Nke nta nke nta ọ na-enweta nkwanye ùgwù maka nkwuwa okwu na obi ike ya, mana oge na-abịa nke a na-ajụ njirimara gị.
Enwere na-adịbeghị anya british tv usoro, site na oge 2, banyere saga a na-akpọ Ikpeazụ eze.
Usoro isiokwu rue ugbu a:
Northumbria, alaeze ikpeazu,
Svein, onye nwere ịnyịnya ọcha,
Ndị isi nke Ugwu,
Abụ nke mma agha
Ọnwụ ndị eze
Uhtred ndị mba ọzọ
Akụkọ mkpirikpi nke Vikings - Manuel Velasco
Este edemede akụkọ na-elekwasị anya ọzọ na mmalite na ọdịdị nke Vikings na Europe n'etiti narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. Yabụ anyị hụrụ ma mụta maka ọdịbendị Viking bara ụba, anyị na-ahụ uru dị ka ndị agha, ndị ọrụ ụgbọ mmiri na ndị na-arụ ụgbọ mmiri, anyị na-achọpụtakwa ha azụmaahịa, nke dugara ha isi n'okporo ụzọ si Greenland ke Constantinople, na ọbụna na Baghdad.
Na ndụ kwa ụbọchị nke ndị ọrụ aka, ndị ọrụ ugbo na ndị ahịa ma, n'ezie, ọ na-akọ banyere nke ya akụkọ ifo na omume okpukpe. Gụnyere ihe mgbakwunye ikpeazụ na ndepụta aha Viking, Ndị eze nke Nordic mpaghara dị iche iche, profaịlụ nke odide mara, ebe mmasi, ma obu ihe omuma banyere ihe di ugbu a nke drakkars, gbakwunye a usoro ọmụmụ zuru ezu viking oge.
Asọ - Francisco Narla
Ihe ọzọ dị ukwuu nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, mana amaala n'oge a, ọ na-emikpu anyị n'ime njem dị mma ịchọta na ịgụ. Assur bụ nwata nwoke Galizia emi odụn̄de ke Outeiro, ekpri obio emi ọdọn̄ọde n̄ko viding wakporo nke na-eyi Compostela bara ọgaranya egwu mgbe afọ gafere Udo nke 968 C.
Nwa mgbei na ụmụnne ya nwoke nke ndị mwakpo jidere, Assur ga-ebido oké njem ima ebe ya no. Maka nke a, ị ga-enweta enyemaka nke Gutier de Leon, infanzón nke Count Gonzalo Sánchez, onye nabatara ya n'okpuru ọzụzụ ya, na Jesse ben benjamin, otu dọkịta ndị Juu nwere obiọma, ya na weland, onye na-arụrụ ndị Norman ọrụ ndị Kraịst. Ma ihe niile ga-adị mgbagwoju anya mgbe ya onwe ya kwa jidere gị ma buru ya gha ebili n’ebe ugwu oyi.
Saga nke Greenlanders & Saga nke Eirikhie Red - Icelandic anonymous na narị afọ nke XNUMX
Antón na Pedro Casariego Córdoba dị ka ndị nsụgharị wetara anyị sagas abụọ ndị a na-akọ ka ndị na-akwado ha, ndị Icelanders sitere na Norway, chọpụta ma chịkwaa Greenland, rute ala ndị America wee gbalịa idobe ebe ahụ ihe dịka n'afọ 1000. Ma anyị ga-aga n'ihu na Galicia n'ihi na ọ bụ otu oge mgbe Vikings nke otu sitere na ọgụ wakporo Santiago de Compostela wee mee mwakpo megide Umayyad caliphate na Asturias.
Ndị na-eri ozu - Michael Crichton
Na m ejedebe na ihe njem na, n'ihi na ndị kasị dị uchu, nwere a Mmegharị ihe nkiri nke ụfọdụ dị mkpa na Onye agha nke 13.
Na narị afọ nke iri caliph nke Baghdad eziga onye nnọchi anya eze Bulgaria, mana zipụ na-atọrọ ndị Vikings. Onye nnọchi anya mba ahụ ga-eji nwayọọ nwayọọ kwụsị mmụta na mmasị site na omenala ndị isi nke ndị jidere ha. Na-esote ha na onye isi ha Buliwyf Gaa na njem dị egwu: alụ ọgụ megide amaghị ihe e kere eke, «lndị na-eri ndị nwụrụ anwụ".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Vikings. Oge gboo na mgbe niile na ejiji. Fọdụ na-agụ
"Northumbria, Alaeze Ikpeazụ" bụ akwụkwọ nke mere ka m mata ụwa nke Vikings. Ahuru m saga na n'anya nke oma na obu ezigbo "Viking" nkwanye lol.
Ezigbo edemede, m debanyere aha ọkachasị mba ndị m na-amaghị.